eHimalaya Online || News from nepal » टाइगर श्राफ कि नायिका निधि को ड्रेस हावाले उडाएपछी उनि हुनुसम्म ट्रो,ल को शि,कार भइन। भनिन यो हावा पनि………..!
टाइगर श्राफ कि नायिका निधि को ड्रेस हावाले उडाएपछी उनि हुनुसम्म ट्रो,ल को शि,कार भइन। भनिन यो हावा पनि………..!
२०७७ चैत ५ गते बिहिबार ०५:४२
नायिका निधिको ड्रेसले न,मज्जाले धोका दिएपछि बलिउड नायिका निधि अग्रवाल लाजले भुतुकै भएकी छन् । अभिनेता टाइगर श्राफ अभिनित फिल्म ‘मुन्ना माइकल’ को ट्रेलर रिलिज भईरहेको थियो । ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा फिल्मको युनिट उपस्थित थियो...
नायिका निधिको ड्रेसले न,मज्जाले धोका दिएपछि बलिउड नायिका निधि अग्रवाल लाजले भुतुकै भएकी छन् । अभिनेता टाइगर श्राफ अभिनित फिल्म ‘मुन्ना माइकल’ को ट्रेलर रिलिज भईरहेको थियो । ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा फिल्मको युनिट उपस्थित थियो । त्यसबेला फिल्मकी नायिका निधिको ड्रेसले न,मज्जाले धोका दिएको थियो।
निधिले उक्त कार्यक्रममा हाई स्लिट फ्लोरल ड्रेस लगाएर उपस्थित भएकी थिइन् । जस्ले गर्दा उनि लज्जित हुनु परेको थियो । स्टेजमा चढ्ने बेला निधिको लुगालाई हावामा उडाइ दियो । जसले उनी वार्डरोव मा,लफंक्सनको शि,कार भइन् ।
लुगालाई हावाले उडाउँदा उनको भि,त्रीवस्त्र म,ज्जाले देखिएको थियो । स्टेजमा टाइगर श्राफ र नवाजुद्दीन पहिलादेखि नै उपस्थित थिए । निधिलाई स्टेजमा चढ्दा आफ्नो हाइ स्लिट ड्रेसलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो । लुगा उडाए लगत्तै निधिको अनुहार लाजले रातो पिरो भयो लाजले भित्र भित्रै यो हावा पनि यति नै बेला किन लागेको होला भनिन ।
प्रकाशित मिति २०७७ चैत ५ गते बिहिबार ०५:४२